Nokia dia hanavao ireo telefaona taloha isaky ny telo volana | Androidsis
Nokia dia marika miavaka tsara amin'ny politikam-panavaozana azy. Ny orinasa dia mampiasa Android One amin'ny findainy, mamela azy ireo hanavao tsy tapaka haingana be. Ho fanampin'izay, ny telefaonanao rehetra, na manao ahoana na manao ahoana ny fari-tanin'izy ireo, mahazo fanavaozana toy izany. Ny orinasa dia manolo-tena ihany koa hitazona ireo telefaona taloha havaozina amin'ny patch patch.
Ity dia zava-dehibe amin'ny orinasa, izay manavao ireo maodely fototra toa ny Nokia 1 aza. Ankoatr'izay dia manome antoka izao, ka na dia mihoatra ny roa taona aza ny telefaona iray, hanohy hamoaka patch patch izy ireo, mba hiarovana anao amin'ny fotoana rehetra.
Nohamafisin'ny solontena iray avy amin'ny HMD Global. Raha vantany vao nahavita ny roa taona ny finday Nokia, izay ananany antoka azo antoka rehetra, dia tsy hahafoy azy ireo ilay marika. Satria mahazo patch patch isan-telo volana izy ireo, vaovao tsara ho an'ireo mpampiasa manana fitaovana avy amin'ny mpanamboatra.
Vaovao lehibe io, satria roa taona lasa izay dia niverina teny an-tsena ilay orinasa. Noho izany, ao anatin'ny volana vitsivitsy dia hisy fiatraikany amin'ny maodelinao sasany, amin'ny heviny fa tapitra ny fanohanana ara-dalàna. Ny orinasa dia mikendry ny hanome fiadanam-po amin'ny mpampiasa amin'ity lafiny ity.
Na dia ireo maodely natomboka tamin'ny magazay tamin'ny 2017 aza, Nokia dia manome antoka ireo fanavaozana ireo. Ka isaky ny telo volana dia hanana tambajotra fiarovana amin'ny telefaona izy ireo, antoka amin'ny fotoana rehetra ny HMD Global. Ho fanampin'izay, raha misy fahalemena manokana na manokana hita, ireo patch ireo dia hanampy isan-telovolana.
Noho io dia voamarina fa hanomboka ny Nokia 5, 6 ary 8 raiso ireto patch patch telo volana ireto manomboka amin'ny volana oktobra amin'ity taona ity ihany. Hitsahatra tsy hanao izany izy ireo amin'ny Oktobra 2020, noho izany dia manana taona fanohanana fanampiny momba an'io izy ireo. Araka ny hitantsika fa hanao izany amin'ny telefaona rehetra ny marika, rehefa tonga ny roa taona hanombohana azy eny an-tsena.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Fitaovana Android » Finday » Nokia hamoaka fanavaozana ny fiarovana ny telefaona mihoatra ny 2 taona